Wp/blk/ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း
ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း (အဲင်းကလေတ်: Wikimedia Foundation; အဒွေါင်ႏ WMF)နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အမေႏရိကန်ႏခမ်း အခေႏခံႏဒါႏ ထူႏတဝ်းအကျိုꩻအမျတ် ပရဟိတအစွိုꩻအဗူႏတဗာႏဒျာႏတဲင် အဝ်ႏစီႏမံႏဖန်းဖြယ်ဖေႏ ဝီခီဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ဌာႏနချုတ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ Wp/blk/ဝေင်ꩻသန်ဖရန်သစ္စကို၊ Wp/blk/ကယ်လီဖိုးနီးယားခမ်းနယ်ႏကိုနဝ်ꩻသွူ။ ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်းနဝ်ꩻ လိုꩻသေအာ အဝ်ႏဒင်ႏထင်ႏဖေႏ အိဉ်တာနဲက် ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား အစွိုꩻသားအနေႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝီခီပီးဒီးယားလုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ဝိစ်သိဉ်နရီ(ဝီခီအဘိဓာန်ႏ)၊ Wp/blk/ဝီခီအာႏကွိုꩻ၊ Wp/blk/ဝီခီလိတ်ဖွူꩻ၊ Wp/blk/ဝီခီရွီးခိုႏ၊ Wp/blk/ဝီခီမီဒီယာ ကောင်မွဉ်း၊ Wp/blk/ဝီခီခွိုꩻဖြယ်၊ Wp/blk/ဝီခီသꩻတင်ꩻ၊ Wp/blk/ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ၊ Wp/blk/ဝီခီဒေတာ၊ Wp/blk/ဝီခီလွေꩻတဖူꩻနယ်ꩻ၊ ဝီခီမီဒီယာ အိဉ်စျူဗေတာ တောမ်ႏ မေတာ-ဝီခီဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻစီႏမံႏဖန်းဖြယ်ဖေႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း လိုဂို
ဝေင်ꩻသေတ်ပီတာစဗတ်, Wp/blk/ဖလော်ရီဒါခမ်းနယ်ႏ၊ အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ။
လို့တဝ်းအငိုꩻ၊ လွစ်တခြင်၊ Wp/blk/ဝီခီအခေႏခံႏ Wp/blk/အိဉ်တာနဲက် ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏ
Wp/blk/ဝေင်ꩻသန်ဖရန်စစ္စကို၊ Wp/blk/ကယ်လီဖိုးနီးယားခမ်းနယ်ႏ၊ အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ / Wp/blk/ဝေင်ꩻလော့အေင်စယ်လီ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားခမ်းနယ်ႏ (မတ်ပိုင်တိဉ်အေးစိဉ့်)
ဝီခီပီးဒီးယား၊ ဝိစ်သိဉ်နရီ၊ Wp/blk/ဝီခီအာႏကွိုꩻ၊ Wp/blk/ဝီခီလိတ်ဖွူꩻ၊ Wp/blk/ဝီခီရွီးခိုႏ၊ Wp/blk/ဝီခီမီဒီယာ ကောင်မွဉ်း၊ Wp/blk/ဝီခီခွိုꩻဖြယ်၊ Wp/blk/ဝီခီသꩻတင်ꩻ၊ Wp/blk/ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ၊ Wp/blk/ဝီခီဒေတာ၊ ဝီခီလွေꩻတဖူꩻနယ်ꩻ၊ ဝီခီမီဒီယာ အိဉ်စျူဗေတာ တောမ်ႏ မေတာ-ဝီခီ
Patricio Lorente (ဗုတ်အစွိုꩻဥက္ကဋ္ဌ)
Lila Tretikov (အမုဆောင်ႏဒါရိုက်တာ)
Template:Wp/blk/IncreaseNegative $၃၅.၇ သန်း
အဖြာꩻ ၂၇၅ ရပ် (ဗꩻတွိုႏ ၂၀၁၅ ဩဂဲစ်လာ)
အစွိုꩻအဗူႏယိုနဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယား တယ်ႏထောင်ႏဖက်သား Wp/blk/စဉ်မီဝေးနဝ်ꩻ ထူႏတဝ်းအကျိုꩻအမျတ် ဖေႏကစွဲးကမ်းကိုနွောင်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားတောမ်ႏ ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻအလင်ဖုံႏ အစွဲးအကမ်းရွဉ်တောင်ႏတာႏတဲင် တယ်ႏထောင်ႏလွေꩻခန်း ၂၀၁၃ ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။
တွိုႏ ၂၀၁၅ ဗာႏနဝ်ꩻ ဖောင်ဒေးသိဉ်းကို ဝွန်ႏထမ်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏလွဉ် အဖြာꩻ ၂၅၀ သွူ။ ရွဉ်နွို့အနေႏနဝ်ꩻ စွုမ်ႏနေင်ႏ တနေင်ႏအကို လꩻလွဉ်စွဉ်ႏ ရွဉ်အမေႏရိကန်ႏ ဒေါ်လာ သန်း(၅၀)လွိုနဝ်ꩻသွူ။ ဖောင်ဒေးသိဉ်း အမုဆောင်ႏဒါရိုက်တာနဝ်ꩻ Lila Tretikov အွဉ်မာꩻဖေႏတဲင် ဗိုတ်အစွိုꩻဥက္ကဋ္ဌနဝ်ꩻ Patricio Lorente ထူႏတာႏဝွန်ႏခါꩻဖေႏနဝ်ꩻသွူ။
↑ Cbrown1023။ Board of Trustees။ Wikimedia Foundation။ July 22, 2015 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ 2.0 2.1 Wikimedia Foundation, Inc. Financial Statements June, 2013 and 2012 (PDF)။ Upload.wikimedia.org။ December 14, 2013 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Staff and contractors page (Wikimedia Foundation website)။ Wikimedia Foundation။ August 7, 2015 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ (ပိဉ်တိစ်) Open for business (၂၀၀၇), Jaap Bloem & Menno van Doorn (trad. Audrey Vuillermier), éd. VINT, 2007 (ISBN 978-90-75414-20-2), p. 93. No official number available since 2006
↑ Neate၊ Rupert။ "Wikipedia founder Jimmy Wales goes bananas"၊ The Daily Telegraph၊ October 7, 2008။ October 25, 2009 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ "The encyclopedia's huge fan base became suchadrain on Bomis's resources that Mr Wales, and co-founder Larry Sanger, thought ofaradical new funding model – charity."
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Announcing Wikimedia Foundation
↑ Wikimedia Foundation, Inc. Financial Statements June, 2014 and 2013 (PDF)။ Upload.wikimedia.org။ December 11, 2014 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/ဝီခီမီဒီယာ_ဖောင်ဒေးသိဉ်း&oldid=5348713"
Last edited on 28 February 2022, at 14:40
This page was last edited on 28 February 2022, at 14:40.